कृषि सहकारीको कार्यालय उद्घाटन - inaruwaonline.com
कृषि सहकारीको कार्यालय उद्घाटन
प्रकाशित मिति: शनिबार, कार्तिक २०, २०७३ समय: १३:४४:४१
२० कात्तिक दिलिप साह राजविराज । जिल्लाको मयनाकरेडी गाविसमा सहकारी संस्थाको स्थापना भएको छ । नयाँ कृषि अभियान कृषि सहकारी संस्थाको शाखा कार्यालय मयाकरेडीमा स्थापना भएको हो । एक कार्यक्रम बीच शुक्रवार जिल्ला कृषि बिकास कार्यालय सप्तरीका प्रमुख भागीरथप्रसाद यादबले कार्यालयको उदघाटन गर्नुभयो ।
कृषि सहकारीका माध्यमबाट बचत संकलन र ऋण लगानी गर्दै परम्परागत खेती प्रणालीलाई अन्त्य गरेर बैज्ञानिक र आधुनिक खेती प्रणालीको बिकास हुने यादबले बताउनुभयो । सो अबसरमा जिल्ला पशु बिकास कार्यालय सप्तरीका प्रमुख डा. काशीनाथ यादबले कृषि सहकारीका माध्यमवाट ग्रामिण क्षेत्रमा पशु पालनमा मद्दत पुग्ने बिश्वास ब्यक्त गर्नुभयो ।
स्थानिय १ सय १५ जना शेयर सदस्यवाट सुरु गरिएको सहकारीको चालु पूँजी रु.छ लाख रुपियाँ रहेको सहकारी संस्थाका अध्यक्ष योगेन्द्र मिश्र‘जवाहर’ ले जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रममा जिल्ला कृषि बिकास कार्यालयका प्रमुख भागीरथप्रसाद यादब र पशु बिकास कार्यालयका प्रमुख डा. काशीनाथ यादबले शेयर सदस्यहरुलाई प्रमाणपत्र बितरण गर्नु भएको थियो ।